Hiriirri mormii guddichi dubartoota qofa hirmaachise Baha Oromiyaa Magaalaa Awwadaayitti – Kichuu
Hiriirri mormii guddichi dubartoota qofa hirmaachise Baha Oromiyaa Magaalaa Awwadaayitti
OMN: (Hag 30, 2020) Hiriirri mormii guddichi dubartoota qofa hirmaachise Baha Oromiyaa Magaalaa Awwadaayitti guyyaa har’aa Hagayyaa 30/2020 sa’aatii 3:30’tti jalqabe jira.
Hiriirri kun Qarree fi hawwan dabalatee akkasuma haadholiin warraa bifa qindoomina qabuun irratti hirmaachuun sagalee isaanii dhageeysisaa akka turan Maddi keenya Awwadaay irraa bilbilaan OMN’itti hime.
Kaayyoon hiriira kanaa Gudeeddaan Shamarran Oromoo irratti Waraana Mootummaatiin gaggeeffamaa jiru nurraa haa dhaabbatu, Hayyoonni keenya kan akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa, Dr Shiggux Galataa fi kanneen hafan biroo Saffisatti hidhaa irraa gadi lakkifamuu akka qabanii fi ajjeechaan Naannoo Oromiyaa keessatti humnoota Tika Mootummaatiin raawwatamaa jiru nurraa haa dhaabbatu Kan jedhu ture.
Jiraattuun Magaalaa Awwadaay hiriira kana irraa qooda fudhatte takka himtutti, Poolisoonni Addaa Oromiyaa fi Humnoonni Raayyaa Ittisa Biyyaa Hiriira kana danquuf yaalaa kan turan yoo tahu, Polisoonni Idilee magaalattii ammoo dhukaasa banuun adda bittinneessee jechuun OMN’itti himte.
Haa tahu malee dhukaasa baname kanaan, miidhaan dhaqqabe homaa kan jirre tahuu odeeffannoo garasii arganneen qulqulleeffannetti jirra.
humnoonni tika Mootummaa Dubartoota hiriiricha irraa qooda fudhatan walitti funaanuun galma guddicha Magaalaa Awwadaayitti argamu jechuuunis iddoo ofiif qubatanitti akka geessan namni garasii dubbifne ifoomse.
Kana malees Dubartoota biroo hidhuuf barbaacha irra akka jiran odeeffannoon garasii nu dhaqqabe Kan mirkaneessuudha. Xumura irratti Hiriirri Qarree fi Hawwan Hirmaachise Kan magaalaa Awwadaayitti gaggeeffame Kun Guutuu Oromiyaatti akka qindaa’u Qeerroo fi Qarreen qooda isaanii bahachuu qaban jedhame.